फेरि किन नेपाल आउदैछन् नरेन्द्र मोदी ? यस्तो रहेछ कार्यक्रम — Sanchar Kendra
१नेपालका एक युवकलाई भारतमा मृ’त्युदण्डको सजाय, यस्तो छ कसुर, को हुन् उनि ?
२नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
३एमाले बैठकमा लफडा, ओली बारे रघुवीर महासेठले गरे यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा
४इजरायलमा ‘केयरगिभर’का लागि १ हजार ६ सय जना सिफारिस, कहिले उड्न पाउछन ?
५राष्ट्रपति सीले पठाएको चार्टर्ड जहाजमा ३ बर्षपछि चीन फर्किइन् सरविना, को हुन् उनी ?
६नेपालबाट कहिले बाहिरिदैछ मनसुन ? मौसमसम्बन्धि यस्तो आयो ताजा अपडेट
७अखिल क्रान्तिकारीको २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, को-को भए नयाँ पदाधिकारी ?
८भरतमोहनकी छोरी माधव नेपालको पार्टीमा
९थप ९५३ जनामा कोरोना संक्रमण, कति जनाको भयो मृत्यु ?
१०एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक- टोली नेताले दिए यस्ता सुझाव
११माधव नेपालकाे साथ छाडेर एमालेमा बस्नेहरुमाथि ओलीले यसरी बर्साए डण्डा, बैठकमा लफडा
१२चीनले क्रिप्टो करेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बिटक्वाइनको मूल्यमा पहिरो
फेरि किन नेपाल आउदैछन् नरेन्द्र मोदी ? यस्तो रहेछ कार्यक्रम
काठमाडौँ, २१ जेठ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरि नेपाल आउने भएका छन् । विमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन मोदी नेपाल आउने भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयपछि आगामी भदौमा मोदीलाई नेपाल आउने बाटो खुलेको हो ।
आगामी भदौमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (विमस्टेक) को चौंथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी भदौ १४ र १५ गते अथवा २१ र २२ गते गर्ने प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रहरुसँग गर्ने निर्णय गरेको छ।
नरेन्द्र मोदीका साथै म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सूची लगायतका एसियाली नेताहरु भदौमा काठमाडौँमा भेला हुने भएका छन् । बिमिस्टेकको नेपाल अध्यक्ष छ । यो क्षेत्रीय संगठनको सदस्यमा बंगलादेश, भारत, म्यान्मार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भूटान र नेपाल सदस्य राष्ट्रको रुपमा छन्।
ईपीएल- काठमाडौं किंग्सको ललितपुरमाथि शानदार विजय